Usoro Nzọụkwụ 8 na Ahịa Ọdịnaya Na-aga nke Ọma | Martech Zone
Vetikal jikoro mepụtara ihe Nzọụkwụ 8 maka ịmepụta oru ngo na-aga nke ọma nke na-agụnye mmepe atụmatụ, echiche, ịmepụta ọdịnaya, njikarịcha, nkwalite ọdịnaya, nkesa, na-eduga nurturing na mmesho. Ilele ire ahia nke ahia a dika uzo di iche iche na ndi ahia ahia di oke nkpa n'ihi na o mejuputara ọdịnaya ya na uzo ma obu ebumnuche nke onye obia na ebe gi ma hu na enwere uzo iji gbanwee.
Okike ọdịnaya na ịrị elu. N'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 50% nke ụlọ ọrụ ugbu a nwere atụmatụ ịzụ ahịa ọdịnaya ma na-efu 62% na-erughị ahịa ọdịnala, ịmepụta njikọ mbụ nwere ike ịbụ ọtụtụ ihe ị ga-ewere. Otu ìgwè siri ike, atụmatụ steeti, na ezigbo ihe ọmụma banyere ụlọ ọrụ gị nwere ike ịbụ ụzọ na-atọ ụtọ ma na-akwụghachi ụgwọ iji mepụta ọdịnaya na-aga nke ọma!
Nke a bụ nnukwu infographic nke na-enye usoro siri ike maka ụlọ ọrụ nwere ngalaba ọdịnaya ma ọ bụ akụ ewepụtara iji hụ na enwere usoro na usoro ha si eme nyocha, mmepe, imezu, ịkwalite na ịlele arụmọrụ ha na ịlaghachi na itinye ego.
Tags: mmepụta ihenkwalite ọdịnayaọrụ ọdịnayaatụmatụ intnetode edemedenkesaonye na-ese ihe ngosiechichendu nurturingmmeshonjikarịchausoroonye ndu oru ngoseo strategistsocial media strategistatụmatụ mmepevetikal jikoro
Jun 30, 2014 na 6:56 AM
Ọzọ dị ukwuu post Doug !! Ezigbo uru ọmụma bara ezigbo uru ative